Yunaaytis Isteets Yamaniif Qarqaarsa Dabalataa Dhiheessufi
Rakkoon gargaarsa namoomaa Yemen keessatti mudatee jiru addunyaa irraa baay’ee hamaa yoo ta’u, daa’imman miliyoonaan laka’aman dabalatee uummati mliyoona digdama ta’u akkaan gargaarsi isaan barbaachisa. Minstriin dhimma alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Blinkeen dhiyeenya wal ga’ii arjoomtotaa irratti akka dubbatanitti “nuti qooda gama keenyaa ba’uuf cicha qabna” jedhan.
Yunaayitid Isteetis biraa deggersa gargaarsa namoomaa itti dabalaa doolaara miliyoona $191 kan kennamu ta’uu ennaan beeksisu gammachuutu natti dhaga’ama. Kunis, waggaa bajataa bara 2021tti deggersa maallaqaa gumaachamu doolaara miliyoona $350n ga’a. Ameerikaan walumaa gala rakkoon sun waggaa ja’a dura erga jalqabee as uummata Yemeniif gargaarsa doolaara $3.4 ol kenniteetti jedhan Blinken.
Deggersi maallaqaa kun michoonni Yunaayitid Isteetis midhaan nyaataa, nagaa eegsisuu, barnoota, qubsuma, fayyummaa, bishaan, qulqullina naannoo akkasumas hanqina nyaataa hamaa ittisuu fi wal’aansa fayyaa dabalatee gargaarsa barbaachisu ittiin garuuf oola. Itti dabaluu dhaanis caasaa bishaanii deebisanii ijaaruu, daandilee barbaachisoo ta’an suphuu fi maatiin galii akka argatan gargaara.
Walumaa gala, malli tokkichi rakkoo namoomaa Yemen keessaa dhaabuuf waraanni gamas jiru dhaabsisuu qofa. Kanaafi kan Yunaayitid Isteetis nageenya buusuuf tattaaffii dimokraasummaa irra deebi’uun jajjabeessaa kan jirtu jedhan ministrichi Blinken.
Bilinken akka jedhanitti “ Houtii jedhamuun kan beekamu hoogganoota Ansaralla irra dhiibbaa kaa’uu itti fufuu dhaan nageenya uummata Yemen imaammata keenya keessatti dursa kennuuf cichaa qabna. Warren Houtii haleellaa daangaa ce’uun geggeessan kan lola kana yeroo isaa dheeressu akka dhaaban waamicha dabarsina.
Adeemsa tokkummaa mootummootaa-n kan dursamu fi jila addaa tokkummaa mootummootaa Martin Griffiths tattaaffii isaan dhukaasi akka dhaabatu, gargaarsa namoomaa fi daandiin akka saaqamu akkasumas mariin nageenyaa akka itti fufu tattaaffii isaan godhan ni deggerra” jedhan.
Yemenitti jila addaa Tokkummaa mootummootaa kan ta’an Tim Lenderking, mootummoonni Saaud Arabiyaa fi Yemen walitti bu’iinsa sanaaf furmaata barbaaduuf cicha qabu. Amma warren Houtii cicha wal fakkaatu agarsiisuu qabu. Warri Hutii magaalaa uummati miliyoona tokko biyya ofii keessatti qe’ee irraa buqqa’ee keessa jiraatu magaalaa Marib irratti haleellaa oofan dhaabanii gara tarkaanfii gara nagaatti geessu akka fudhatan Yunaayitid Isteetis waamicha dabarsiti.
Ministrichi Blinken “ dhuma irratti mariin nageenyaa walitti bu’iinsa kana dhaabsisu hatattamaan akka jalqabamu abdii qabna” jedhan “Yeroon kun yeroo dhiibbaan akkasii itti taasisamuu fi Yemen isee tasgabbooftee fi badhaate, kan lammiiwwan ishee jireenya isaanii deebisanii ijaaruu danda’anii fi dhuma irratti abdii fi hegeree wayyaawaa ta’e qabaatan akka taatu gochuu ti jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.